Brezila: Fanafody nahafaty trondro 80T tany Rio de Janerio · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Desambra 2008 19:05 GMT
Raha mbola mitodika any amin'ny tondradrano any Santa Catarina ny fifantohan'ny ankamaroan'ny mponina any Brezila, dia nisy voina nanimba tontolo iainana hafa koa mianjady amin'ny firenena, ity kosa dia eto amin'ny fanjakan'i Rio de Janeiro. Ny 18 Novambra, dia nisy fanafodina pesta endosulfan izay mahafaty niraraka tamin'ny reniranon'i Pirapetinga, ivarinan'ny reniranon'i Paraíba do Sul, ka nahafaty trondro anarivony – mihoatra ny 80 taonina – tany Resende sy ny tanàna manodidina. Niteraka fahatapahan'ny fanomezan-drano ny tanna fito tamin'iny faritra iny izany. Ny tena zavadoza moa dia nitranga indrindra ity voina ity amin'ny fotoana hitomboan'isan'ny biby ahiana ho lany taranaka. Cintia Sibucs [pt] no miteny fa ankoatra ny trondro dia nahita lambondrano maty ihany koa izy, ary hatramin'ny vorona aza :
Hitan'ny birao mpanaramaso ny tontolo iainana ny poizina raraka taorian'ny fanadihadiana nataony, rehefa notairin'ny fahafatesana trondro maro dia maro tamin'ny reniranon'i Pirapetinga sy Paraiba do Sul ry zareo. Nilaza ny sampan'ny Servatis ao Resende, orinasa miandraikitra ny fanatsarana ny fambolena, fa raraka ny 1 5 00 litatra endosulfan ary nolazainy fa vokatry ny tsy fitandreman'ny mpiasa teo amin'ny fampifanohizana ny siniben'ny fiarabe [pt] no anton'ny fandrarahana. Tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ambadiky ny fahafatesana, tsy misy atahorana”, no ihantsian'i Vitor Menezes [pt] izay nolazain'ny orinasa tamin'io andron'ny 19 Novambra nisian'ny loza io, izay nilaza avy hatrany ampitson'io fa efa voafehy nytoe-draharaha:
Nilaza tamin'ny vohikalany hita eto [pt] ny orinasa tompon'andraikitra tamin'ny fandrarahana fanafody pesta endosulfan tao amin'ny reniranon'i Paraiba do Sul, Servatis, fa araka ny lazain'ny ekipany misahana ny tontolo iainana, dia manakaiky ny zero ny taharon'ny fangaro niraraka tany an-drenirano ka noho izany dia “tsy misy atahorana ho an'ny biby” iny. Tsy nahazo izany hafatra izany kosa aloha ireto trondro hita amin'ny sary eto ambany ireto.
Araka ny hita taty aoriana moa dia betsaka noho ny 1 500 litatra nolazain'i Servatis no niraraka. Niraraka ny fangaro nandritra ny famindrana azy tamina fiarabe mahazaka 30 000 litatra, fa 12 000 litatra mifangaro amin'ny ranon'orana ihany no voangon'ny fandraofan'ny orinasa ho anaty sinibe. Nanaiky moa ny Servatis taty aoriana fa 8 000 litatra raa kely indrindra ny fanafody niraraka – izay mifanohitra tamin'izay nolazainy tamin'ny herinandro. Mamariparitra ny fiantraikan'ny fandrarahana poizina amin'ny fokonolona an-toerana ny mpahay lalàna sady mpiaro ny tontolo iainana Luiz Felipe Muniz de Souza [pt] :
Voasazy handoa onitra R$ 33 000 000 (tokony ho US$ 13.3 arivo arivo) ny Servatis, izay nampakaran'ny orinasa any amin'ny fitsarana ambony [pt], sy sazy fampiatoana 20 andro. Niverina nisokatra indray izy androany 9 Desambra, teo amin'ny sampan-draharaha rehetra ankoatra ny famokarana endosulfan . BIOTRIBO [pt] maneho ny heviny:
Mahatsapa ny bolongana A TroLhA [pt] fa misy mizana tsindrian'ila ny fampiharana ny lalàna iarovana ny tontolo iainana any Brezila:
Rui Camejo [pt] mampahatsiahy antsika fa tsy vao sambany ny Servatis fa tsy sambany no nanapotehany ny tontolo iaianana tahaka izao. Araka ny nolazain'ny mpamaham-bolongana dia efa tompon'andrakitra tamin'ny firarahan'ny famonoana bibikely Dimetutato ihany koa io telo taona lasa izay. Nanome ny akon'izany ao amin'ity lahatsoratra ity ny namana mpamaham-boloongana Norival Duarte [pt] ary nanome ny heviny koa:
Voarara any amin'ny firenena maro manerantany, ampiasaina hanaraha-maso (ifehezana ny fitomboan'isa) ireo karazana bibikely maro, vitsika ny endosulfan. Voarara any Eoropa ny fampiasana azy ary miezaka mampahafantatra ny olona hanery ny mpitondra ao amin'ny fireneny tsirairay avy ny Environmental Justice Foundation (fikambanana rariny ho an'ny tontolo iainana) handrara ny fampiasana ity endosulfan ity sy ny lisitry ny akora shimika voasoratra ao amin'ny fifanarahan'i Stockholm.